निद्रा विकारहरू र पोषणको सकारात्मक प्रभाव - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 23, 2019 | सो, स्वास्थ्य र कल्याण |0|
1 आहारमा परिवर्तनले तपाइँको निद्रा बान्कीलाई कसरी असर गर्छ?
1.1 प्रोटीनको प्रभाव
1.2 पोषण र निद्रा - कसरी कार्बोहाइड्रेटहरूले तपाईंलाई प्रभाव पार्छ र निद्रा विकारहरू
1.3 तपाइँको निद्रा तालिकामा खनिजहरूको भूमिका
1.4 भिटामिन र निद्रा विकारहरूमा उनीहरूको योगदान
"तपाईं के खानुहुन्छ" यो उद्धरणले तपाईले खानु भएको खानाले तपाईको समग्र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा कसरी असर पार्छ भन्ने बारेमा धेरै कुरा गर्छ। तर के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले कसरी खानु भएको खानाले तपाईंको निद्रा बान्कीलाई असर गर्छ?
हाम्रो पेटमा पोषण हुन्छ कि केहि हाम्रो शरीरलाई प्रभाव पारिरहेको छ, जबकि अन्य अन्य प्रक्रियाहरू विनियमित। यसले निद्रा विकारहरूलाई पनि असर गर्दछ।
निन्द्रा तपाईंको शरीरको एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कपी mechanism संयन्त्र हो। यो तपाईंको शरीरको लागि महत्त्वपूर्ण छ निदाउँदा थकाउने दिन पछि आफै रिचार्ज गर्न। पोषण र निद्रा दुबैले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रभावहरू प्रदान गर्दछ।
जब कि हामी धेरै जसो विभिन्न विधिहरूद्वारा निन्द्राको लागि उत्प्रेरित गर्ने धेरै जसो प्रयासहरू गर्छौं, एउटा ध्यान हामीले फोकस गर्न असफल हुन्छौं हामीले लिने पोषण छनौट गर्नु हो। अन्जानमा पोषणले निद्रा विकारहरू प्राप्त गर्न वा कम गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
केहि खाद्य उत्पादहरू जुन हामी अत्यधिक पौष्टिक ठान्छौं त्यसले हाम्रो निद्रा तालिकालाई हानि पुर्‍याउँछ। अरूले राम्रो रातको निद्रामा ठूलो योगदान दिन सक्दछन्। त्यसैले हामी निद्रा विकारहरु मा पोषण को प्रभाव मा एक अन्तरदृष्टि ले!
आहारमा परिवर्तनले तपाइँको निद्रा बान्कीलाई कसरी असर गर्छ?
यो भन्नु पूर्ण रूपमा सही नहुन सक्छ कि विशेष आहारले निन्द्रालाई बढावा दिन वा निद्रा सम्बन्धी समस्याहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। तथापि; अध्ययन देखाउनुहोस् कि केहि खानेकुरा उत्पादनहरू जस्तै माछा, फलफूल, तरकारीहरू, र दुध युक्त खाद्य वस्तुहरूको सेवनले मानवमा स्वस्थ निद्रा बान्कीलाई बढावा दिन्छ।
यो विश्वास गर्न सुरक्षित छ कि पोषणको निन्द्रामा तपाईको निद्राको अनुभव हुन्छ। यद्यपि यो सही आहारले कुन कुरालाई बढवा दिन्छ भनेर अहिलेसम्म अज्ञात छ, अनुसन्धानकर्ताहरूले निद्रा विकारहरू र समग्र स्वास्थ्यमा विभिन्न पोषणको भूमिका पाउन सक्षम भएका छन्।
प्रोटीन टिशू मर्मत र मांसपेशिहरु को पुनः प्राप्ति संग यसको फाइदाहरु देखाउन प्रख्यात छ। अब अध्ययन एकको निद्रा चक्रमा प्रोटीनको भूमिका पनि फेला पारेको छ।
तपाईंको खानामा पर्याप्त मात्रामा प्रोटीनको उपस्थितिले स्वस्थ निद्रा बान्कीमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। प्रोटीन, या त शाकाहारी रूपमा वा मांसाहारी फारमले पोषणको उचित स्रोत प्रदान गर्दछ।
विशेषज्ञ विश्वास गर्नुहोस् कि कम र उच्च स्तरको प्रोटीनको उपभोगले उनीहरूको आहारमा स्प्यान र निद्राको गुणस्तरको साथ सम्बन्ध छ जुन मानिसहरूले रमाइलो गर्दछन्। कारकहरूले संकेत गर्दछ कि तपाइँको खाना कसरी निद्रा सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधान गर्न प्रोटीनमा धनी हुनुपर्दछ।
पोषण र निद्रा - कसरी कार्बोहाइड्रेटहरूले तपाईंलाई र s लाई प्रभाव पार्दछकुष्ठ रोग
हामीले अघि नै भनेजस्तै पोषण र निद्राको बीचमा कडा लि link्क छ।
कार्बोहाइड्रेटहरू हाम्रो जाने-जाने उर्जा प्रेरणा पोषण हुन् जसले हामीलाई दिनभर उर्जा राख्न मद्दत गर्दछ। जबकि हामीले प्रयोग गर्ने प्रत्येक वस्तुमा कार्बसको केही मात्रा यस्तै छ, अध्ययन विश्वास गर्नुहोस् कि कार्ब्सले हामीलाई छिटो निदाउँछ।
कार्बोहाइड्रेटयुक्त भोजन रगतमा इन्सुलिन उत्पादन गर्न जानिन्छ। यसले एमिनो एसिड शोषण बढाउने परिणाम दिन्छ र अन्त्यमा छोडिन्छ Tryptophan रगतमा।
ट्रिप्टोफान सेरोटोनिनको अग्रदूत हो, एक न्यूरोट्रान्समिटर जसले तपाइँको मुड बढाउछ र रसायनिकको अभिभावक निर्माता पनि Melatoninजो निन्द्राको मुख्य कारण हुने एजेन्ट हो।
यद्यपि कार्बोहाइड्रेटले तपाईंलाई राम्रो निद्रामा मद्दत गर्दछ, तपाईंले उत्तम खालका नतीजाहरू पाउन कुन प्रकारको कार्बोहाइड्रेटलाई तपाईंको आहारमा समावेश गर्नु हुन्छ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।
जब यो पोषण र निद्राको कुरा आउँछ, जटिल कार्बस साधारण कार्ब्सभन्दा उत्तम हुन्छ किनभने जटिल कार्ब्समा फाइबर हुन्छन् जबकि साधारण कार्ब्सले तपाईंको रगतमा ग्लूकोजको स्तर बढाउन सक्दछ।
तपाइँको निद्रा तालिकामा खनिजहरूको भूमिका
खनिजहरूले समृद्ध खानाले तपाईंको स्वास्थ्यमा मात्र होइन तर तपाईंको निद्रा तालिकामा पनि गहिरो प्रभाव पार्दछ।
दाबी फिर्ता अध्ययन गर्दछ कि तपाइँको खाना मा खनिज को खपत तपाइँको निद्रा विकार सम्बन्धित धेरै सुधार देखाउन सक्छ।
यहाँ केहि खनिजहरू छन् जुन तपाइँले तपाइँको आहारमा समावेश गर्नुपर्दछ तपाईंको निद्रा चक्रमा सुधार अनुभव.
म्याग्नेसियम: म्याग्नेशियमले शरीरलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ, जुन निन्द्राको निम्ति आवश्यक छ। यसले "निद्रा हर्मोन" melatonin नियमित गर्न सहयोग गर्दछ जसले तपाइँको शरीरको निद्रा चक्रलाई प्रभाव पार्दछ। तपाईंको खानामा म्याग्नीशियमको अभावले अनिद्रा पनि निम्त्याउन सक्छ।
जस्ता: अनुसन्धान तपाइँको खाना मा जस्तको एक स्वस्थ स्तरले तपाइँको निद्रा को मात्रा र गुणलाई असर गर्छ भनेर देखाउँदछ। जिंकको उपभोगले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई प्रभाव पार्छ जुन आवश्यक प्रक्रियाहरू जस्तै निद्रामा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। जस्त स्वस्थ निद्रा बानी को नियमन को लागी एक महत्त्वपूर्ण खनिज हो, यो को एक सन्तुलित मात्रा तपाईको खाना मा सुझाव छ।
फलाम: तपाईको खानामा फलामको अभावले फलामको कमी एनीमियाको कारण हुन सक्छ। यससँगै आएका धेरै लक्षणहरू भूख, टाउको दुख्ने, चिडचिड, र नराम्रो मुडको कमी हो। अध्ययन देखाउनुहोस् कि जो मानिसहरू फलामको अभाव एनीमियाको कारणले यस्ता लक्षणहरू अनुभव गरिरहेका छन् उनीहरूलाई केही बिन्दुमा निन्द्राको विकार देखा पर्न सक्छ।
भिटामिन र निद्रा विकारहरूमा उनीहरूको योगदान
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, भिटामिनको तपाईंको निन्द्राको गुणस्तर र मात्रामा एक कुरा छ। भिटामिनको कमीले तपाइँको निद्रा चक्रलाई असर गर्दछ, तपाइँलाई धेरै प्रेरित गर्न अग्रसर गर्दछ निन्द्रा सम्बन्धित समस्याहरु.
धेरै प्रकारका भिटामिनहरू प्राकृतिक अवयवहरू वा कृत्रिम स्वास्थ्य पूरकको रूपमा रहेका हुन्छन्, तिनीहरू मध्ये प्रत्येकको तपाईंको निद्रा चक्रको गुणस्तर कायम राख्नको लागि खेल्ने भूमिका हुन्छ।
यहाँ केहि भिटामिनहरु छन् जुन तपाईको निद्रा बान्कीलाई धेरै नै प्रभाव पार्छन्।
भिटामिन सी: एक अनुसार अध्ययन, भिटामिन सी निद्रा अभाव रोक्न सहयोगकर्ताको रूपमा काम गर्दछ। जो मानिस भोजनमा भिटामिन सी को अभाव छ उनीहरुलाई निद्रामा समस्या हुन्छ। न्युरोट्रान्समिटर सेरोटोनिनको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन भिटामिन सीले ठूलो भूमिका खेल्छ। यसले तपाईंको निद्रा बान्कीसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्धको वर्णन गर्दछ।
भिटामिन डी: भिटामिन डीले शरीरमा क्याल्सियमको अवशोषण गर्न मद्दत गर्दछ, यसले स्वस्थ निद्रा चक्रलाई पनि मद्दत गर्दछ। अध्ययन भिटामिन डी को सन्तुलित पूरकको साथ मानिसहरूले निद्राको गुणस्तरमा फाइदा देखाएको छ। भिटामिनको अभावले निन्द्राको विकार पनि निम्त्याउन सक्छ। भिटामिन डीसँग निद्रा विकारहरूको उपचारमा यसको प्रयोगका साथ ध्यानयोग्य चिकित्सीय प्रभावहरू छन्।
तपाईंको आहारमा यी सबै आवश्यक पोषक तत्वहरूलाई समावेश गर्नाले तपाईं आफ्नो निन्द्राको गुणस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
जबकि सबै पौष्टिक तत्वहरूको साथ सन्तुलित आहार लिन महत्त्वपूर्ण छ, तर केफिन जस्ता केही उत्पादहरू काट्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। को एक निर्धारित खुराक Zopiclone निद्रा सम्बन्धी समस्याहरूबाट छिटो राहत पाउन पनि एक राम्रो विकल्प हो।
तपाइँको निद्रा विकारबाट छुटकारा पाउनको लागि लक्ष्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँको जीवनशैलीमा स्वस्थ आहार समावेश गर्न सम्झनुहोस्।
पछिल्लोकिन सफल व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत विकास योजना प्रयोग गर्छन्!
अर्कोतपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न व्यक्तिगत विकास योजना
पानी निको पार्ने फाइदाहरू